Inkolo yamaSilamsi yenye yezona zixhaphake kakhulu kwihlabathi. Ngelo xesha, kungekhona amaKristu kuphela, amaYuda okanye amaHindu kuphela, kodwa nabemi baseMaslim amazwe ngokwabo, abazi kangako malunga nemigqaliselo ephambili yeKoran.
Oku kubangela ukunyaniseka kwamaninzi kunye nokubandlulula ngendlela, ngokomzekelo, ubudlelwane bokwakha kwiintsapho zamaSulumane.
Iingcamango ezibalulekileyo kuzo zonke amaSulumane zi "halal," "makrooh," kunye ne "haram." "Ukudibanisa" - oku kuvumelekileyo, kuvunyelwe kokubili ngokomthetho nangokwenkolo. "Makruh" yinto engathandekiyo, kodwa engavunyelwe, isenzo. Ayinalo ukukhawulwa ngokuthe ngqo, kodwa ukuba iphethwe ngokulula, yile yindlela yokuya kwisono. "UHaram" ngumthetho owenqatshelwe ngumthetho okanye inkolo, apho umntu ahlawuliswa emva kokufa, kwaye ngexesha lobomi bakhe basebenokuhlwaya ngokuhambelana nomthetho we-Sharia.
Ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi kwi-Islam
AmaSulumane awawuthinteli ngokupheleleyo umtshato, njengomzekelo, ubuKristu, kodwa uchaza ngokuchanekileyo into evunyelwe umyeni wakhe nokuba akavumelekanga kumfazi wakhe. Ukwahlukana kule nkolo kudikibala kakhulu, kodwa kukho iimeko apho indoda yaseSilamsi ingavunyelwe ukuba yenze intsapho, kwaye ukuba uyayidala, kufuneka ahlukane ngesicelo sokuqala somfazi wakhe. Oku kuquka, umzekelo, inkohlakalo kumfazi.
Abantu abade bevela kwi-Islam bakholelwa ukuba isimo sengqondo somyeni kumfazi wakhe kule nkolo siqinileyo, sinobukhohlakali, ukuba lo mfazi usekhoboka lokuzithandela kuqala kunye noyise kunye nabazalwana bakhe, ngoko kunye nomyeni wakhe. Konke oku kukude noko kubonakala. Imisebenzi yendoda yamaMuslim kumfazi wayo inkulu kangangokuthi ikwazi ukukhuphisana ngokukhawuleza kunye nekhowudi enkulu yokuziphatha eyamkelwe kunoma yiphina inkolo okanye inkcubeko. Nazi ezinye zeemfuno ze-Islam kumadoda.
Indoda yamaMuslim iyafuneka ukuba ibonise umgangatho omhle ngokuphathelele kumfazi wayo. Kumele atyumbe umsindo wakhe, ungamhlukumezi ngamacavils kwaye ungabonakali ngonya.
Ukuba indoda ibuya ekhaya evela emsebenzini, kufuneka ibuze ngempilo yomfazi wayo. Yaye kuxhomekeke kwimpendulo yakhe yokwenza. Ukuba uvakalelwa kakuhle, uvumelekile ukuba abe yedwa kwi-caress yakhe, ukukhawula, ukumanga. Yaye ukuba ngokukhawuleza ubonakala edidekile okanye ecinezelekile, indoda iyaxanduva lokumbuza malunga nezizathu kunye nokunceda ekuxazululeni iingxaki.
Abantu baseYurophu banokukhwelezela izinto ezithile xa befunda ngokubanzi malunga noko kuvunyelwe amadoda ngokumalunga nabafazi babo kwiSilamsi. Umzekelo, akuqhelekanga kwiziko zobuKristu ukwenza izithembiso zobuxoki. Kwi-Islam, kukholelwa ukuba ukuze kuqinisekiswe umfazi, indoda ivunyelwe ukuthembisa iintaba zayo zegolide. Indoda enesazela esicacileyo nangenonono inokumthembisa yonke into ayifunayo, nangona eyazi ngokuqinisekileyo ukuba akakwazi ukwenza. Kukholelwa ukuba ekubeni indoda yedwa yondliwa yintsapho, kwaye umfazi uhlala ekhaya aze avelise abantwana, umyeni unyanzelekile ukuba axabise ukholo lwakhe kwizinto ezilungileyo.
Ekhaya, umfazi ongumSilamsi akafanele ahambe emigqubutheni nakwiimvusa. Ngaphezu koko, loo mntu unyanzelekile ukuba athenge iingubo ezingcono kunye nelinen ecikizekileyo kunye nemihlobiso kwisicelo sokuqala. Umfazi kufuneka afihla ubuhle bakhe kunye nobulili kuphela kuluntu. Ekhaya, indoda yamaMuslim ivumelekile ukuba ibone kuyo yonke inkazimulo yayo. Kule meko, umyeni wakhe akacebisi ukuba agcine kwiingubo okanye ngokutya komfazi wakhe. Oko kukuthi, unokuthenga izitya zokugqibela eziphathekayo kunye nezindleko ezibiza kakhulu, nje ukukholisa umfazi wakho othandekayo. Kodwa ukugungqiswa nokunyuka komyeni kunokuthathwa njengesono kwi-Islam.
Ingxabano enkulu ivela phakathi kweetoliki zeQuran kunye nabaphengululi bamaSulumane bafunda i-Islam malunga nemfundo yomyeni womfazi wayo. Abaninzi bayaqiniseka ukuba ivunyelwe kumyeni ngokumalunga nomfazi wakhe kwi-Islam. Enyanisweni, umyeni wase-Islam, nangona kufanele afundise umfazi wakhe, kodwa ukubetha kuye cishe akufanele. Abasetyhini abangagcini imbeko yentsapho kwaye abayikukhusela isakhiwo sayo bangahlawuliswa yindoda. Ukungafuni, ukunyaniseka kunye nolwaphulo-mthetho kumthetho we-Sharia, umyeni angazama ukuyeka yena ngokwakhe, kwaye kuphela xa engaphumelelanga, ke unyanzelekile ukuba atshintshele umfazi kumthetho. Umyeni unyanzelekile ukukhusela intsapho yentsapho ekuhlekeleni, kunye nomfazi wayo-ekunyeleni. Ngakolunye uhlangothi, ukuba umfazi ngokwakhe uyaziwayo, uthanda ulwahlulo nokuhleba, kufuneka ahlakulele inhlonipho ngabadala. Ngokukodwa oku kusebenza kwiimeko apho umfazi omncinane ephikisana nodade okanye unina. Ukuze uxolo phakathi kwentsapho kunye nezihlobo ezindala zibe nzima, umyeni unyanzelekile ukuba ahlale emfihle yonke ingcaciso malunga nokusilela kwimeko kunye nokukhuliswa komfazi.
Kwimeko yeengxabano zentsapho, umyeni wakhe uvalwe yiSilamsi. Ukuze ungayithinteli ingxabano, indoda iyavunyelwa ukuba ithululule usuku. Umfazi ngeli xesha kufuneka afike, apholise kwaye axolise. AmaSulumane akholelwa ukuba umfazi akakwazi ukuma umyeni wakhe ixesha elide, kwaye esi sihlandlo esibi kakhulu kuye. Nangona umfazi ozikhukhumeleyo kunye onenkani uyakwazi ukuzithoba kunye ngosuku kwaye afumane izixazululo ezinokuthula okungaqondakaliyo.
Ingqalelo enkulu kwi-Islam ihlawulwa kwimithandazo yendoda kumfazi wayo. Ukukhuliswa komyeni ngumfazi wamaSulumane kubandakanya ukubaluleka okukhulu. Ngoko umyeni kufanele a thandaze ku-Allah naluphi na ukuphucula kwindlela yakhe yokuziphatha, mcele kuye, okanye abulele ukuba sele sele kwenzekile. Kule ndoda iphinde ilale uxanduva lokungaphumeleli ukwenza isono. Kukholelwa ukuba umfazi unobungozi kwaye unobuthakathaka, kwaye indoda, njengentloko yentsapho kunye nomntu onamandla, inyanzelekile ukuba imelane neengcamango zesono zomfazi. Kulo mzekelo, umyeni akafanele abe ngumthwalo, kwaye kufuneka avumele umfazi ukuba abonise iimpembelelo ezincinane kunye nokungaphumeleli okungahambi kwisono. Okokuthi, akafanele afuneke kakhulu kuye, kwaye kuphela ukuziphatha okungakhokelela kwi-haraam (isenzo esinqatshelwe) sinokulawula. Ngelo xesha, imidlalo kunye nomfazi, nokuba kungcakazo, ayithathwa njengonono, bayamkelwa, njengoko banceda ukuqinisa intsapho, kodwa ukuphuma kwiindawo zokuzonwabisa kunokuvunyelwa umfazi, kwaye umyeni makayilandele ngokungqongqo.
Njengoko kunokubonwa ukusuka ngasentla, iziseko zobomi bentsapho kwiSilamsi azifani kakhulu kwiinkcubeko zentsapho zabalandeli bezinye iicawa. Ukuqonda eli qiniso kufanele kube negalelo ekukholeni kwabantu abanamasiko ahlukeneyo kunye neenkolelo ezahlukileyo.
Inkxwabo yengqondo yobomi bentsapho
Imithetho emihlanu elula yokufumana ubomi obonwabileyo
Andiyithandi intombi yomntakwabo
Indlela yokuqiniseka ngokunyaniseka kweemvakalelo
Oko kufuneka ukuba uphumelele
Iindidi eziqhelekileyo zabasetyhini
Umthendeleko weNdlunkulu: funda indlela yokwenza umququzeleli womntwana
Ikhalenda yokukhulelwa: iiveki ezingama-23
Izifo zemilenze ekhathele